प्रबर्धित सामग्रीहरु Archives - Emakalu Online
कोरोना भाईरस रोकथाम सम्बन्धी चिचिला गाउँपालिकाको अनुरोध
विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोविड १९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लक डाउन गरेको सर्वविधितै छ । कोरोना भाईरसको संक्रमण तथा जोखिमबाट बच्न नेपाल सरकारबाट विभिन्न निर्णयहरु र सरोकारवालाहरुबाट कार्यन्वयन भईरहेको छ । यसै सन्दर्भमा संक्रमण भित्रिन र फैलन नदिन मानिस हिडडुल र सवारीसाधनको आवागमन कडाईका साथ बन्द गर्नु पर्ने भएको छ । यस चिचिला गाउँपालिका भित्र प्रवेश गर्ने तपशिलका स्थ...
कोरोना भाईरस सम्बन्धी सिलिचोङ गाउँपालिकाको अनुरोध
कोरोना भाईरसबाट रोकथामको लागि सिलिचोङ गाउँपालिकाले गरेको तयारी सम्बन्धी रिपोर्ट https://www.youtube.com/watch?v=R4Rl1ac9rCc&t=3s
खाँदबारी । यहि माघ १० गतेदेखि १३ गते विहानसम्म खाँदबारीको कृष्ण होमियो तथा प्राकृतिक थेरापी सेन्टरमा आयुर्वेदिक डाक्टरद्वारा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको छ । बरिष्ठ आयुर्वेद डाक्टर अमृत भण्डारी ले तीन दिन सेवा दिने भएको हो । शिबिरमा पायल्स (बबारिस) फिष्टुला (भगन्दर) को विना अप्रेसन क्षारसुत्र प्रविधिबाट उपचार गरिने कृष्ण होमियोका सञ्चालक कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । शिविरमा आउने हरेक बि...
विज्ञापनः के तपाईलाई पनि जाँड रक्सी छुटाउने औषधी चाहिएको छ ?
के तपाईलाई थाहा छ ? खाँदबारीमा नै विना अप्रेसन पायल्स फिष्टुलाको उपचार गरिन्छ नी ! (विज्ञापन)
के.एच् फर्मा तथा प्रकृतिक थेरापी सेन्टर खाँदबारी १ प्रगति टोल, खाँदबारी नगरपालिका गेटको माथिल्लोपट्टि सम्पर्क नं. ९८४२५५०७७०, ०२९५६१०४०, ९८०७००१५५५ https://www.facebook.com/sajhakhabar123/videos/2696554817058082/ हामी यहाँ छौं । खाँदबारी नगरपालिकाको गेट छेउमा । हाम्रो फार्मेसी । हामी कहाँ उपलब्ध केही औषधी तथा सामग्रीहरु
दाङ । देउखुरीको राजपुर गाउँपालिका-४ मुङग्रेठाबाट पक्राउ परेका नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाका नेताहरुको साथबाट प्रहरीले हतियारसहित महत्वपूर्ण कागजात बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले पक्राउ परेका व्यक्तिहरु तथा उनीहरुको साथबाट बरामद गरेका हतियार, नगदसहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ६ थान पेस्तोल, २ थान म्यागज...
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो कारागारको रुपमा रहेको केन्द्रीय कारागारमा ‘भिडियो कन्फरेन्स हल’ निर्माण भएको छ । कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीलाई अदालतमा उपस्थित नै नगराई भिडियो कन्फरेन्समार्फत वकीलले वयान लिन पाउने गरी कन्फरेन्स हल निर्माण गरिएको हो । केन्द्रीय कारागारका कारागार प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाले भिडियो कन्फरेन्सिङ सेवाको शुरुआतसँगै सम्बन्धित कैदीबन्दीले कारागारभित्रबाटै अदालतमा भिडियोमार्...
विदेशबाट फर्किएर च्याउखेती तिर लागेपछि
मोरङ । कुनैबेला देशमा काम पाइएन भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका बुढीगंगा गाउँपालिकाका सरोज नेपाल अहिले आफ्नै ठाउँमा व्यवसाय गरेर रमाउनुभएको छ । च्याउ खेतीले उहाँले विदेश फर्किने बाटो बिर्सिसक्नुभएको छ । उहाँको प्रगति देखेर छरछिमेकी समेत दंग छन् । सरोज सानैदेखि कृषि कर्मलाई रुचाउनुहुन्थ्यो । केही व्यवसाय गरेर स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो । कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा सरोजले ग...
योगमाया बारे के भन्छन् मदन पुरस्कार विजेता निहारिका ? (भिडियो सहित)
निलम कार्की (निहारिका) २०७४ सालको मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार हुन् । उनले योगमायाको बारेमा उपन्यास लेखेर उक्त पुरस्कार जितेका हुन् । उक्त पुस्तक मार्फत मदन पुरस्कार पाएपछि भोजपुर र संखुवासभा आएका कार्कीसँग संखुवासभाको सामुदायिक रेडियो खाँदबारी एफ एममा पत्रकार ध्यान कुलुङले पुस्तक र योगमायाको बारेमा कुराकानी गरेका थिए । उक्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । https://www.youtube.com/watch?v=...
दीपन श्रेष्ठको गीत राजेश पायलको आवाजमा सार्वजनिक (भिडियो सहित)
संखुवासभा । गीतकार दीपनकुमार श्रेष्ठको ’आँखाबाट मन हुँदै’ बोलको अर्को गीत सार्वजनिक भएको छ । बसन्तपञ्चमी अर्थात सरस्वती पुजाका दिन जन्मिएका श्रेष्ठले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर आईतबार उक्त गीत सार्वजनिक गरेको हो । उक्त गीतको शब्द भिडियो मेरो अनलाईन टिभिबाट सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा सुप्रसिद्ध गायक राजेश पायल राईको स्वर रहेको छ भने दार्जिलिङका बरिष्ठ संगीतकार गोपाल सरगरम राईको संगीत रहेको छ । अन...